Igwe anaghị agba nchara Njem
Bar & Nkebi
Flange & Pipe Dabara Adaba
Mmadụ Bịa Iji Mizhang
2205 igwe anaghị agba nchara mezuwo
site ha na 19-03-20
Mkpụrụ ike nke 2205 duplex anaghị agba nchara bụ ihe karịa ugboro abụọ ka elu dị ka na nke nkịtị austenitic igwe anaghị agba ígwè. Nke a na atụmatụ na-enyere ndị na-emepụta iji belata ibu na-emebe ngwaahịa, na-eme nke a alloy ọzọ na-eri-irè karịa 316,317L. Nke a alloy bụ karịsịa kwesịrị ekwesị n'ihi na iwe iwe ọkụ ...
Isi nnọchiteanya ọkwa nke duplex igwe anaghị agba nchara
site ha na 19-03-15
Isi nnọchiteanya akara ule nke duplex anaghị agba nchara nwere ike n'ozuzu kewara n'ime anọ ige: 1. Low alloy ụdị - nnọchiteanya ọkwa: uns S32304 (23Cr-4Ni-0.1N) 2. Ọkara alloy ụdị - nnọchiteanya ọkwa: uns-S31803 (22Cr- 5Ni) -3Mo-0.1N) 3. elu alloy ụdị - repres ...
Definition na e ji mara nke igwe anaghị Steel Enweghị nsogbu Pipe
1. igwe anaghị agba nchara enweghị nkebi anwụrụ definition igwe anaghị agba nchara enweghị nkebi anwụrụ a ogologo warara nke nchara na oghere ngalaba na dịghị nkwonkwo gburugburu ya. 2. The e ji mara nke igwe anaghị agba ígwè enweghị nkebi anwụrụ Akpa, thicker mgbidi ọkpụrụkpụ nke ngwaahịa a, ndị ọzọ echekwa na ihe ọ bụ, an ...
Dị iche iche nke igwe anaghị agba nchara Nzuzo akpọrepu mpempe akwụkwọ
Site na ụlọ n'ógbè, akpakanamde ụlọ ọrụ na azụmahịa ụlọ, ígwè Ibé akwụkwọ na-ọtụtụ-eji a ọnụ ọgụgụ nke ngwa. Na taa 'ụwa, igwe anaghị agba nchara ngwaahịa nwere ịghọ integral akụrụngwa ruru ya irè ewu na ha nnweta na dị iche iche iche iche na iche-iche ....
Gịnị ka ewere mgbe ị na-ahọrọ igwe anaghị mpempe akwụkwọ
Staintless ígwè ngwaahịa-ewu nnọọ ewu n'ụwa taa n'ihi na ya irè ewu, ndị a na-ọma jiri na ahịa. Nke a na-ewu ewu n'ihi na nke na-eri-irè nke ihe onwunwe, na-enye pụrụ iche corrosion na-eguzogide na magburu onwe workability. Steel Ibé akwụkwọ nwere ike withsta ...
Common okwu nke n'ichepụta usoro nke ígwè
The n'ichepụta usoro nke ígwè bụ na-agbagwoju anya ma na mgbagwoju, na-achọ na ọtụtụ ego nke pụrụ iche okwu na-akọwa kpọmkwem ihe na-eme n'oge usoro. Ị nwere ike nụrụ a ole na ole n'ime ha, ma na-adịghị n'aka na ihe ha na-abuana. Anyị na-na depụtara a ole na ole n'ime ndị nkịtị t ...
Igwe anaghị agba nchara kemgbe akụkụ dị oké mkpa nke mmadụ
The inception nke arọ metal bụ a ngọzi nye onye ahụ. Itinye n'ọrụ nke igwe anaghị agba ígwè site na onye na-amalite site na hotel ọrụ, na-emepụta ọgwụ ọrụ na n'ichepụta nkeji. Ọ dighi kwa arahụ efu ebe ọ bịara ìhè ma ọ bụ ọ ga-abụ n'ọdịnihu. Ọ nọwo na-adịkarị ack ...
420 igwe anaghị agba nchara enweghị nkebi anwụrụ
Ahịa: USD 3500 ~ USD 4000 / ton 1.Stainless Steel Pipe nkọwa: ọkwa: ASTM 420 / 2Cr13 Ogologo: 3000mm, 6000mm, 12000mm, ahaziri ọkpụrụkpụ: 2-100mm od: 20-300mm Type: oghere mmanya / oyi akpọrepu anwụrụ / imenyụ anwụrụ Asambodo: BV, ISO, SGS mbukota: plastic okpu Price okwu: FOB, CFR, CIF, etc. Advantage: Q ...
1 Ft, No.11, Lane 16299, Puwei Road, Shanyang Town, Jinshan District, Shanghai, China 201500
310s Stainless Steel Pipe, Igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ & eriri igwe, Igwe anaghị agba nchara Channel Bar, Igwe anaghị agba nchara Now Bar, Igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ / eriri igwe, Ntekwasa Steel mpempe akwụkwọ,